Vol. 17 MAY, 1913. No. 2
MAN wuxuu ku raaxeysanayaa shaqada mala-awaalka, laakiin wali dhif ama weligiis kama fikiro si uu u ogaado waxa uu yahay, sida ay u shaqeyso, waxa qodobbada loo shaqeeyey, maxay yihiin howlaha iyo natiijooyinka shaqada, iyo waxa ujeeddada dhabta ah ee mala-awaalku yahay . Sida ereyada kale, sida fikirka, maskaxda, fikirka, mala-awaalka waxaa badanaa loo adeegsadaa si aan kala sooc lahayn ama aan lahayn macno qeexan. Dadku waxay ka hadlaan mala-awaalka iyagoo amaanaya, sida helitaanka ama u-ekaanta ragga waaweyn oo awoodoodu iyo awoodeeduba ay qaabeeyeen himilooyinkii quruumaha iyo dunida; isla dadkaasina waxay uga hadli doonaan inuu yahay astaamaha kuwa kale ee aan ficil ahayn, ee leh karti sixirayaal ah iyo maskax daciif ah; in riyooyinkan caynkaas ahi faa'iido lahayn, riyooyinkooduna weligood rogrogaan, ay filayaan waxa aan weligood dhicin; iyo, waxaa loo arkaa naxariis iyo quudhsi.
Maskaantu waxay sii wadi doontaa inay dib u soo kabashada yoolalka. Waxay ku qaadan doontaa meelaha sare ilaa kuwa kale hoos u galaan. Waxaa laga yaabaa inay ragga ka dhigto ama ay gashto.
Mala-awaalku maaha nebula lama-fahmi karo oo riyooyin ah, damacyo, malo-awaal, khiyaali ah, khayaali ah, aragtiyo madhan. Fahintu waxbay qabtaa. Waxyaabaha waxaa lagu sameeyaa mala-awaalka. Waxa mala awaalka lagu sameeyaa waa sida dhabta ah qofka sameeya, sidoo kale waa wax soo saarka mala awaalka marka loo adeegsado jir ahaaneed.
Taasi waa mid run u ah ninka uu ka warqabo. Dadku waxay ku baraarugaan waxyaabaha iyagoo ku gacansaaraya isaga ama u jeedinaya iyaga. Ma fahmin wixii uu ka warqabo, ilaa uu ka bixiyo dareenkiisa iskuna dayo inuu ka fikiro oo fahmo. Markuu ka fekero oo isku dayo inuu fahmo, mala-awaalku qaabab cusub ayuu ku soo baxayaa; wuxuu arki doonaa macnayaal cusub qaabab duug ah; wuxuu baran doonaa sida loo sameeyo foomamka; wuuna fahmi doonaa wuxuuna sugi doonaa farshaxanka ugu dambeeya ee mala-awaalka, goosgoosadka iyo sameynta qaabka.
Maskaxdu kuma xirna saacadda iyo goobta, in kasta oo mararka qaar awoodda muuqaalka muuqaalka ee ninku uu ka firfircoon yahay ugana firfircoon yahay kuwa kale, hadana waxaa jira meelo ka wanaagsan kuwa kale xagga shaqada, maahan ciyaar, mala-awaal. Waxay kuxirantahay dabeecadda, dabeecadda, dabeecadda, horumarka shakhsiga. Waqtiga iyo goobtu waxbadan ayey ka dhaxeeyaan riyada kaasoo rajeeya inay wax dhacayaan oo sugaya fursadaha iyo niyadda, laakiin mala-awaalka abuuraya fursado, wuxuu ka saaraa niyada, isaga ayaa sameeya waxyaabaha. Isaga, mala-awaalku wuu shaqeeyaa wakhti kasta iyo meel kasta.
Kuwa qiyaasi waa mid taban ama taban, dad shicib ah ama firfircoon, riyo ama riyo ah. Fikradaha riyada riyada waxaa soo jeediya dareenka iyo walxaha ay ka midka yihiin; mala-awaalka mala-awaalku wuxuu u badan yahay inuu sababay fikirkiisa. Riyadaadu waa mid xasaasi ah oo dareen leh, mala-awaalku waa mid xasaasi ah oo wanaagsan. Riyada ayaa ah mid maskaxdiisa, maammurtiisa, ay ka tarjumeyso ama qaadeyso qaababka walxaha dareenka ama fikradaha, iyo kuwa kuwan beddelay. Mala-awaaluhu ama mala-awaaluhu waa midka keenaya muuqaalkiisa muuqaalka ah, xaalad u qaab ah, ku hagta fikirkiisa, iyadoo loo eegayo aqoontiisa oo lagu go'aaminayo awoodda doonistiisa. Fikradaha qaldan iyo dhawaqa xasaasiga ah iyo qaababka ayaa soo jiitaa riyada. Maskaxdiisa ayaa raacaysa iyaga oo ku ciyaaraya koodhkooda, ama ku dhegan oo haysta iyaga, oo muuqaalkiisa kuliyadda ayaa lagu dhaqaajiyaa laguna qasbay inuu siiyo muujinta sida ay u hagaan. Khayaalihu wuxuu dejiyaa macallinkiisa muuqaalka ah wuxuuna xidhaa dareenkiisa isagoo si joogto ah uga fikiraya illaa uu ka helo fikradiisa. Sida abuur loogu tuuray ilmo galeenka dhulka, ayaa fikirka la siiyaa macbudka muuqaalka. Fikradaha kale waa laga saaray.
Ugu dambayntii wuxuu ku nastay aqoonta qarsoon ee maanka iyo awoodda doonista, mala-awaaluhu wuxuu kiciyaa macallinka muuqaalkiisa fikradiisa illaa ay ka shaqeyso mala-awaalka. Marka loo eego aqoonta qarsoon ee mala-awaalka iyo awooda doonista, fikirku wuxuu nolosha ku qaadanayaa kuliyadda muuqaalka. Xasaasiga ayaa markaa loo yeeraa in la istcimaalo mid walbana wuxuu ku shaqeeyaa shaqada mala awaalka. Fikirka laga qaatay qaab mala-awaal ah, waa muuqaalka udub-dhexaadka ee koox ama kooxo qaab, kaasoo midabkeeda ka qaadanaya iyo kan saamayn ku leh ilaa laga gaadhayo shaqada male-awaalku.
Sidee mala-awaalku u shaqeeyaa ayaa lagu muujiyey kiiska qoraaga. Adigoo ka fikiraya, wuxuu u rogaa iftiinkiisa maskaxeed mowduuca uu doonayo inuu soo saaro oo si xamaasad leh ayuu ugu kacaa sida uu u maleynayo. Maskaxdiisa kama caawin karto, way jeediyaan ama wareeriyaan. Adigoo sii wadaya fikirka wuxuu cadeeyaa oo xooga saarayaa iftiinka maanka ilaa uu ka helo mawduuca fikirkiisa. Waxay ku imaan kartaa aragtidiisa maskaxiyan si tartiib tartiib ah sidii ceeryaamo culus oo kale. Waxay u baqaan kartaa gabi ahaanteedba sida hillaac ama fallaaraha qorrax soo baxa. Tani kama mid aha dareenka. Waa maxay dareenkaani ma garan karo. Markaa macallinkiisii ​​muuqaalku wuu shaqeeyaa, oo caqligiisuna si firfircoon ayey ugu hawlan yihiin qiimaynta jilayaasha ay awooddiisa muuqaalku ku siinayaan. Waxyaabaha adduunka ka maqan waxaa loo isticmaalaa illaa iyo inta ay ugu adeegi karaan sidii qalab loogu talagalay dejinta maaddada adduunkiisa dhexdeeda. Markii ay jilayaashu u soo baxaan qaab, dareen kasta wuxuu kudeeqeeyaa isagoo ku daraya cod ama dhaqaaq ama qaab ama jir. Dhammaantood waa lagu nool yahay noloshooda taasoo uu qoruhu ugu yeeray shaqada mala-awaalka.
Imaamku waa u suura gal qof kasta oo bini aadam ah. Iyada oo qaar ka mid ah awoodaha iyo awoodaha mala-awaaladu ay kooban yihiin xad yar; kuwa kale loo horumariyey hab aan caadi ahayn.
Awoodaha mala-awaalku waa: awooda rabitaanka, awooda fikirka, awooda doonista, awooda dareenka, awooda waxqabadka. Rabitaanku waa geeddi-socodka jahwareerka, xoog badan, soo jiidashada iyo qaybta aan caqliga lahayn ee maskaxda, isagoo dalbanaya muujinta iyo qancinta dareenka. Fikirku waa diiradda iftiinka maskaxda ee maaddada fikirka. Doonista waa qasab, oo laga fikiro, wixii uu doortay inuu sameeyo. Xanuunku waa gudbinta aragtida laga helo xubnaha dareenka ee loo maro awoodaha maskaxda. Ficilku waa sameynta waxa qofku doonayo ama doonayo.
Awoodahaani waxay ka soo baxaan aqoonta taas oo maskaxdu hore u soo heshay. Fikradaha caanka ah waa khaldan yihiin, in farshaxanka mala-awaalku yahay hadiyad dabiiciga ah, in awoodaha loo adeegsado khayaali ahaan ay yihiin hadiyado dabeecadda ama natiijada dhaxalka. Erayada hadiyadaha dabiiciga ah, dhaxalka iyo gaarsiinta macnihiisu waa waxa kaliya ee ku yimid dadaal nin leeyahay. Farshaxanka iyo hadiyadda mala-awaalka iyo awoodaha loo adeegsaday mala-awaalka ayaa ah dhaxalka nolosha hadda jirta qayb ka mid ah wixii uu ninku ku soo helay dadaalkii noloshiisii ​​hore. Kuwa iyagu leh awood yar ama rabitaan mala-awaal ah waxay sameeyeen dadaal yar oo ay ku kasbadaan.
Maskaxda ayaa la horumarin karaa. Kuwa yar, wax badan ayey horumarin karaan. Kuwa iyagu wax badan ayaa laga yaabaa inay sii horumariyaan. Caqligu waa qalab, laakiin micnaheedu maahan horumarka khayaali ah. Dareennada cilladaysan ayaa noqon doona qalab ciladaysan, laakiin kama horjoogsan karaan ka shaqeynta mala-awaalka.
Imaamku wuxuu ku gaadhay edbin iyo jimicsi maskaxda xagga shaqaynta mala-awaalka. Si aad u edbiso maskaxda malo awaalka, xulo maaddada aan la taaban karin oo ku lug yeela fikirka ku saabsan waqtiyada joogtada ah illaa la arko oo maskaxda lagu garto.
Mid ayaa horumariya mala-awaalka illaa heerka uu ku edbiyo maskaxda ujeeddada. Dhaqanka dareenka ayaa ku darsada qiimeyn rasmi ah qaar ka mid ah saameynta shaqada mala-awaalka. Laakiin farshaxanka mala-awaalka wuxuu ku xidhmayaa maskaxda oo waxaa loo gudbiyaa ama loo maraa dareenka iyada oo loo marayo awoodaha maskaxda ee la xidhiidha mala awaalka.
Waa in la soo gabagabeeyo lambar bisha Juun